Barcelona Oo Si Xun U Soo Xasuuqday Cadowgeeda Espanyol, Lionel Messi Oo Laba Gool Oo Cajiib Ah Dhaliyay Xili MSD Ay Shabaqa Wada Gaadheen. - Gool24.Net
Barcelona Oo Si Xun U Soo Xasuuqday Cadowgeeda Espanyol, Lionel Messi Oo Laba Gool Oo Cajiib Ah Dhaliyay Xili MSD Ay Shabaqa Wada Gaadheen.
December 9, 2018 Mahamoud Batalaale
Barcelona ayaa guul wayn ka soo gaadhay kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Espanyol iyada oo Lionel Messi uu dhaliyay laba gool oo laaga xorta ah halka Luis Suarez iyo Ousmane Demeble ay min hal gool shabaqa ku gaadheen waxayna Blaugrana guushan ku soo gaadhay 4-0 iyada oo si xun u soo xasuuqday Espanyol oo marti loo ahaa.
Barcelona ayaa sii dheeraysatay hogaanka La Liga waxayna kulankan u muuqdeen kuwo si buuxda uga soo kabsatay xaaladii aan fiicnayn ee ay xili ciyaareedkan ku soo jireen. Kooxda Valverde ayaa goolal intan ka badan ku guulaysan kartay iyada oo fursado badan ay lumiyeen.
Kaydka: Denis Suarez, Carles Alena, Thomas Vermaelen, Jasper Cillessen, Juan Miranda, Philippe Coutinho, Munir El Haddadi
kaydka: Esteban Granero, Roberto Jimenez, Leo Baptistao, Sergio Garcia, Naldo, Roberto Rosales, Pablo Piatti
Barcelona ayaa qaybtii hore ee kulankan garoonka ka samaysay wax walba oo ay doonaysay waxayna xaalad xun ku abuurtay kooxda martida loo ahaa ee Espanyol. Barcelona ayaa qaybtii hore ee kulankan soo bandhigay mid ka mid ah qaab ciyaareedkeedii xili ciyaareedkan ugu fiicnaa iyada oo goolal aad u tiro badan dhalin kartay.
Barcelona ayaa qaybtii hore hogaanka ciyaarta ku haysay 3-0 laakiin waxay heshay fursado cadaan ah oo ay 5-0 ama 6-0 ay ciyaarta ugu dili kartay iyada oo Lionel Messi iyo Luis Suarez ay min hal mar birta u garaaceen Espanyol oo nasiib ku lahayd in qaybtii hore saddex gool oo kaliya laga dhaliyay.
Daqiiqadii 17 aad Lionel Messi darbo looga xorta ah oo layaableh ku garaacay goolhaye Diego Lopez kaas oo markale dhibane u noqday mucjisada reer Argentina kaas oo kubbad sii durkaysay halka sare ee birtu iskaga timaado kaga xareeyay goolka wuxuuna sidaa Messi ku dhaliyay goolka salka ka riday Espanyol.
Just look at the curve
The Greatest free-kick taker of All times pic.twitter.com/TIkqeyWLjR
— Barca URDU (@URDUbarca) December 8, 2018
Daqiiqadii 19 aad Luis Suarez ayaa kubbad cajiib ah goolka Espanyol hortiisa kaga helay Messi laakiin waxa uu awoodi waayay in uu dhaafiyo goolhaye Diego Lopez kaas oo sameeyay badbaadin cajiib ah.
Daqiiqadii 26 aad Ousmane Demeble ayaa halkiisa ka sii watay layaabkii uu soo samaynayay isaga oo muujiyay in aanu kala jeclayn lugta uu u dooranayo in uu kubbada ku darbeeyo wuxuuna si qurux badan lugta midig ugu darbeeyay kubbad caawin uu Lionel Messi oo soo dagaalamay uu ka helay, waxayna ciyaartu noqotay 2-0 Barca hogaanka ku dheeraysatay.
Daqiiqadii 36 aad Barcelona ayaa rumaysan kari wayday inayna helin goolkeeda saddexaad kadib markii uu Luis Suarez kubbada dhaafiyay goolhaye Lopez laakiin kubbada ayaa birta kaga dhacday halka ay dhulka kaga taalo!.
Daqaqiiqadii 38 aad Barcelona ayaa markale birta u garaacday Espanyol laakiin sidayna gool u noqon? Diego Lopez ayaa Rakatic ka beeniyay gool cadaan ah laakiin Messi ayaa markiiba kubbada madaxa ku darbeeyay balse waxa uu Messi arkay kubbada oo markale ka soo booday birta goolka.
Daqiiqadii 45 aad Luis Suarez oo fursado aad u sahlan soo qasaariyay ayaa cid walba kaga yaabsaday qaabkii uu xagal aan la dareemi karin uu goolka saddexaad ee Barcelona uga dhaliyay isaga oo kubbad caawin uu ka helay Dembele ka xoogsaday difaaca Espanyol balse kubbada uu ka saaray lugaha Lopez ayaa shabaqa gashay.
Qaytii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-0 ay Barca hogaanka ku haysay balse ay aad iyo aad Espanyol ugu nasiib lahayd in kooxda Valverde ay laba jeer birtu ka beenisay isla markaana uu Suarez fursado halis ah qasaariyay.
Qaybtii labaad ee ciyaarta markii layskugu soo laabtay waxay Barcelona u muuqatay kuwo natiijada ciyaarta isku hubsaday balse wali raadinayay in ay goolal kale keensadaan halka Espanyol ay awooda saaraysay in ay goolasha iska soo yarayso.
Daqiiqadii 58 aad Lionel Messi ayaa kubbad kula soo baxay goolka Espanyol waxaana loo fashay goolka afraad ee kooxdiisa laakiin goolhaye Diego Lopez ayaa markan sameeyay badbaadin cajiib ah si uu gool cad u beeniyo.
Daqiiqadii 65 aad Lionel Messi ayaa meel aad uga baxsan xerada ganaaxa Espanyol waxa uu markale kubbad laaga xorta ah uu ku indho sarcaaday goolhaye Diego Lopez kaas oo si buuxda ugu fashilmay in uu wax badbaadin ah sameeyo wuxuuna Messi dhaliyay goolkiisii labaad oo laag xor ah isla kulankan gudihiisa isaga oo ciyaarta ka dhigay 4-0 ay Barca ku xasuuqayso Espanyol.
Daqiiqadii 86 aad Valverde ayaa ciyaarta soo galiyay Philippe Coutinho wuxuuna saaray Ousmane Dembele oo sii watay bandhiigii uu Coutinho kaydka ugu diray.
Daqiiqadii 73 aad Espanyol ayaa u dabaal degtay goolka ay u arkaysay in ay farqigii ku soo yaraysay laakiin garsooraha ayaa ku laabtay muuqaal caawiyaha garsoorka waxaana cadaatay in dhawr ciyartoy oo Espanyol ahi ay offside ku jireen waxana sidaa lagu diiday goolkii uu Duarte dhaliyay.
Inta wixii ka danbeeyay ciyaarta ayaa noqotay mid lagu kala calaf qaaday waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 4-0 ay Barcelona ku xasuuqday dariskeeda ay xifiltamaan ee Espanyol waxayna guushani Barca ka caawisay in ay sii dheeraysatay hogaanka La Liga.